Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : /bins/ohabolana/sahona.mg.n
Ohabolana Ao ihany ny takatra nihinana ny valala. [Rinara 1974 #317, Cousins 1885]
Ao ihany ny vano nitsaingoka ny sahona. [Rinara 1974 #318, Cousins 1885]
Aza mijokojoko mampiseho vombona, tahaka ny takatra mijoko sahona. [Cousins 1885 #620]
Manjokojoko miseho vombo, tahaka ny takatra mijaiko sahona. [Cousins 1885 #1624]
Ohabolana Ny vorombazaha no mitabataba, ka taitra ny sahona. [Veyrières 1913 #5772, Cousins 1885 #2528]
Ohabolana Sabakaka mandro an-ony, sahona mandro an-tatatra : aoka samy handro amy ny onin-drainy. [Cousins 1885 #2810]
Tsindretra mandry an-tanimbary, sahonamandry an-tatatra, mamba mandry an-osy : samia mitoetra amy ny onin-drainy. [Cousins 1885 #3311]